Waftigii Khaatumo ee loo diiday garoonka Galkacyo oo u kicitimay Caabudwaaq. – Radio Daljir
Waftigii Khaatumo ee loo diiday garoonka Galkacyo oo u kicitimay Caabudwaaq.
Galkacyo, Feb 15 ? M/weyne kuxigeenka maamulkii lagu dhisay Taleex Cabdinuur Cilmi Maxamed ?Biindho? iyo waftigii uu hoggaaminayey ayaa maanta u ambabaxay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kaddib markii maamulka Puntland uu u diiday in ay ka dhoofaan garoonka diyaaraha ee magaalada Galkacyo.
Waftiga Biindho, muddo todobaad ah ku sugnaa magaalada Galkacyo ayaa aadistooda Caabudwaaq ku salaysan tahay sidii ay halkaasi uga dhoofi lahaayeen, kaddib markii uu burburay qorshe ay ku damacsanaayeen in ay uga duulaan garoonka Galkacyo, taasoo Puntland ay hor-is-taagtay.
Xubnaha maamulkaasi Taleex lagu yagleelay ee Khaatumo, ayaa waxaa hoggaaminayey Cabdinuur Cilmi Maxamed ?Biindho? oo ah ku-xigeenka hoggaanka maamulkaasi, waxaana sidoo kale ka mid ahaa dhawr xubnood oo ka mid ah wasiirrada loo magacaabay maamulkaasi oo midka maaliyaddana ka mid yahay.
Waftiga Khaatumo ee loo diiday in ay Galkacyo ka dhoofaan ayaa ujeedkooda imaatin ee Galkacyo ku abbaarnaa in ay uga sii tallaabaan magaalada Muqdisho, iyagoo sida la sheegay martiqaad ka helay dawladda federaalka.
Degmada Caabudwaaq ayaa lagu wadaa in ay ka dhoofaan waftigaasi, iyadoo halkaasi ay soo caga-dhigan doonto diyaaraddii geyn lahayd Muqdisho.
Dawladda Puntland ayaa horay si xooggan uga hor-timid magacaabiddii maamulkaasi Khaatumo, kuna tilmaantay mu?amarad ay maleegayaan siyaayisiin gobolkaasi ka soo jeedda.
Hase ahaatee,ma jirin faahfaahin rasmi ah oo kasoo baxday dowladda Puntland taasoo masuuliyiinta Khaatumo ka mamnuucaysa garoomadeeda.